March 18, 2020 by aminawehelie
Arbaco, 18th of March, 2020-UK- Dowladda Ingriiska ayaa amar ku bixisay in dhamaanba iskuullada dalkeeda albaabada loo laabo laga bilaabo maalinta Jimcaha ah ee bishu tahay 20.
Ra’iisulwasaaraha UK Boris Johnson aya ashaaca ka qaaday in dowladiisu ay qaadeyso tallaabooyin muhiim u ah sidii loo xakameyn lahaa xanuunka CaronaVirus, COVID-19, sidaas darteedna ay lagama maarmaan tahay in la fuliyo ammarada ka soo baxaya dowladda.
Xirista iskuullada oo ka bilaabaneysa maalinta Jimcaha ah ee soo socota, ayaa waxaa shaaca ka qaaday Xooghayaha waxbarashada, Gavin Williamson.
Amarka xirista iskuullada ayaa waxaa dhinac socda, tallabo loogu ogolaanayo in caruurta qaar ay iskuulada aadaan, hase yeeshee ay dhici karto in iskuulkoodii maahee, mid kale ay tagaan, sababta oo ah, in la doonayo in waalidiintooda oo ah dad shaqeeya looga qafiifiyo, culeyska uga imaanaya xanaaneeynta caruurta.
Dhanka kale imtixaanaadka GCSE iyo A Level ayaa iyaguna la shaaciyey in aan sanadkaan loo fariisan doonin, bilaha May iyo June oo alaaba la qaadi jiray, wuxuuna xooghayaha waxbarashada ee UK sheegay, in ardaydu heli doonaan natiijooyin u qalma, lamase hubo wax uu ula jeedo taas.
Tan iyo intii uu dillacay xanuunka CaronaVirus COVID-19 ayaa waxaa xanuunka uGu dhintay gudaha UK, 104 qof.
Previous Kabcada oo laga wada saaray dadka
Next 11 qof oo cusub ayaa xanuunka Corona haleelay Shiinaha.